Ahoana ny fampidinana torrents tsy mitonona anarana ary manafina ny adiresy IP anao? | la-manette.com
1 décembre 2021 feh Claude henrichon
Ny tambajotra BitTorrent dia mbola toerana tian'ny olona maro eran'izao tontolo izao. Raha jerena ny habeny goavam-be, dia afaka mahita izay rehetra tadiavinao ianao. Saingy mety efa fantatrao fa tsy miafina ny hetsikao rehefa misintona torrent amin'ny fitaovanao ianao. Izany no antony mety hitady fomba hisintonana torrents tsy mitonona anarana.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny BitTorrent ianao dia afaka mamaky ny torolàlana amin'ny antsipiriany momba ny le ny fomba fiasan'ny torrents ary ny teknolojia izay manome hery azy ireo.
Tsy azo lavina fa ny fampidinana avy amin'ny torrents dia tsy azo antoka toy ny taloha. Na dia misintona votoaty ara-dalàna aza ianao, toy ny rafitra fiasana Linux open-source, manara-maso anao hatrany ny masoivohon'ny governemanta any amin'ny firenena sasany. Birao sy sekoly maro koa no manakana ny tranokala torrent sy ny fifamoivoizana torrent. Vao mainka mahasosotra izany rehefa manandrana mahazo votoaty ara-dalàna ianao amin'ny fampiasana an'io fitaovana fizarana rakitra P2P io.
Ato amin'ity lahatsoratra ity, dia hilaza aminao ny fomba hanaovana falehan-driaka azo antoka ary ataovy tsy fantatra anarana ny fampidinana torrent anao. Amin'izany fomba izany, tsy mila manahy momba ny mpanelanelana na ny ISP-nao ianao, satria hafenina ny adiresy IP-nao.
Ahoana ny fomba hisintonana torrents tsy mitonona anarana?
Ny fomba tsara indrindra hisintonana torrents tsy mitonona anarana dia ny fampiasana a VPN. Misy tombony maromaro amin'ny fampiasana VPN ankoatry ny tsy fantatra anarana. Azonao atao ny mampiasa azy io mba hidirana amin'ny serivisy sy tranokala tsy hita ao amin'ny faritra misy anao. Afaka manampy anao koa izy ireo amin'ny fidirana an-davitra ny loharanon'ny orinasanao, hialana amin'ny sivana, sy ny maro hafa.
1. Mampiasà VPN hisintona torrent tsy mitonona anarana
Ny fomba mora hijanonana tsy hita maso dia ny misintona torrents amin'ny VPN. Serivisy tambajotra tsy miankina virtoaly dia mampita ny fifamoivoizana amin'ny mpizara azy amin'ny alàlan'ny famoronana tonelina virtoaly misy miafina. Noho izany, ny adiresy IP izay hitan'ny mpanelanelana dia ny an'ny mpizara VPN fa tsy ny tena adiresy IP anao.
Raha tsy fantatrao ny fomba fiasan'ny Virtual Private Network (VPN) dia afaka mamaky ianao ny lahatsoratra amin'ny antsipiriany momba izany.
Rehefa mampiasa VPN ianao, dia mitranga ny fizotran'ny encryption alohan'ny handefasana ny angonao amin'ny ISP-nao. Fa maninona no tsy malaza be ny VPN? Nahoana no tsy ampiasain'ny olona rehetra manodidina antsika ny serivisy VPN? Ny tena antony dia mety ho noho ny tsy fananan'ny olona hevitra betsaka momba ny tombony sy ny tsy fahampian'ny serivisy VPN. Misy angano hafa momba ny serivisy VPN izay tokony hohadinoina.
Vakio ihany koa: Ahoana no hahitana ny toerana nalaina sary
2. Mampiasà proxy ho an'ny torrent tsy mitonona anarana
Misy serivisy tsara taratasy fanomezam-pahefana, toy ny Smartproxy, BTGuard na HideMyAss, izay ahafahanao manafina ny adiresy IP anao amin'ny besinimaro. Izy io dia miasa amin'ny mpanjifa BitTorrent lehibe rehetra. Mariho fa raha misafidy rindrambaiko proxy ianao dia tsy hahazo tombony amin'ny fanafenana. Fanampin'izany, ny proxy dia tsy mitonona anarana ny fifamoivoizana amin'ny fampiharana tokana. Azonao atao ny mamaky ny fahasamihafana amin'ny antsipiriany ao amin'ny lahatsoratra hafa.
Efa nanangana ihany koa izahay a lisitry ny proxy ho an'ny torrents, ka jereo. Aorian'ny fametrahana ny VPN na proxy anao dia azonao atao ny mitsidika tranokala toy ny DNSLeak mba hanamarina raha toa ka DNS mandositra. Amin'ny alàlan'ny fitsidihana tranokala toy ny iPleak.net, azonao atao ny manamarina bebe kokoa ny fiainanao manokana.
3. Mampiasà boaty voa
Ny seedbox dia mpizara natokana ho an'ny fampidinana torrent haingam-pandeha izay ampiasaina manokana amin'ny famindrana torrent. Ny tombony dia manana hafainganam-pandeha avo lenta noho ny fifandraisana HTTP haingana rehefa manafina ny adiresy IP-nao. Tena afaka manafina ny adiresy IP-nao izy ireo, saingy tsy midika izany fa tsy mitonona anarana foana izy ireo.
4. Torrent downloaders ao amin'ny rahona
Cloud torrent downloaders dia serivisy an'ny antoko fahatelo ahafahan'ny mpampiasa misintona torrents avy amin'ny lohamiliny. Ny sasany amin'ireo ohatra tsara indrindra dia misy serivisy toa ny Filestream, Premiumize, Bitport, ary Cloudload. Amin'ny lafiny fampiasana, ny interface dia mora ampiasaina ary mety ho an'ny vao manomboka.
Mitovy amin'ny Seedbox izy ireo, saingy tsy izy rehetra no afaka mamafy indray. Raha ny momba ny fiainana manokana dia toa samy manana ny politikany manokana ny serivisy tsirairay, koa aoka ho azo antoka fa hampiasa ny tsara.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fanaovana Clone telefaona: Fampiharana Cloning telefaona tsara indrindra hamindrana ny angonao rehetra
5. Ampiasao Usenet
Usenet dia iray amin'ireo fomba manokana indrindra hizarana rakitra hatramin'ny andro voalohan'ny Internet. Na izany aza, ny hany fetrany dia ny hoe tsy maimaim-poana ny mpizara Usenet haingam-pandeha ary tsy maintsy maka famandrihana karama ianao mba hidirana amin'izy ireo. Ny famahana haingana dia ny fampiasana serivisy manolotra fitsapana maimaim-poana, toa an'i Easynews.
VPN tsara indrindra ho an'ny Torrenting Anonymous
Nifidy ny sasany amin'ireo serivisy VPN tsara indrindra azonao ampiasaina hisintonana torrents tsy mitonona anarana izahay. Ny fidirana amin'ny Internet tsy miankina,,, NordVPN, ary Surfshark dia sasany amin'ireo serivisy VPN tsara azonao andramana. Misy safidy malalaka hafa koa, raha tianao.
Ny fampiasana VPN amin'ny torrent dia ahafahanao misintona torrents amin'ny tambajotran-tsekoly na fikambanana. Matetika izy ireo no manakana ny fifamoivoizana BitTorrent amin'ny tambajotrany, izay mahazatra amin'izao andro izao.
Vakio ihany koa: Serivisy VPN tsara indrindra: Hevitra momba ny mpamatsy VPN tsara indrindra
Tokony hampiasa navigateur Tor ve ianao amin'ny torrent tsy mitonona anarana?
Tsia ny valiny ankapobeny. Ny fomba ifampizarana tsy tapaka an-tserasera amin'ny fampidinana am-pilaminana sy fanafenana ny IP-nao dia amin'ny alàlan'ny navigateur web Tor. Saingy matetika ny olona dia manandrana manamboatra ny rindranasa BitTorrent, toy ny uTorrent na Vuze, mba handehanana amin'ny Tor ny fifamoivoizana ary hiafara amin'ny olana. Mpanjifa maro no tsy miraharaha ny firafitry ny proxy manual anao satria mampiasa UDP izy ireo hiresahana amin'ny mpizara, fa ny proxy socks Tor dia tsy manohana TCP ihany.
Misy fomba hafa ahafahan'ny mpiara-mianatra mahafantatra ny tena adiresy IP anao. Ho fanampin'izany, raha tsy voarakotra ny fifandraisanao amin'ny BitTorrent, dia afaka mijery ny fifamoivoizanao koa ny fampitaovana famoahana Tor. Na ny tetikasa Tor aza dia manoro hevitra ny tsy hampiasa Tor ho an'ny BitTorrent noho ireo olana ara-piarovana ireo.
Ankoatra izany, antony iray hafa tsy tokony hampiasana Tor ho an'ny torrent dia tsy hanome anao ny hafainganam-pandehan'ny fampidinana tsara raha jerena ny fomba fiasan'ny tambajotra Tor.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fanamboarana azy rehefa tsy mandeha ny klavier Windows 10
Hitanao ve fa mahasoa ity lahatsoratra ity momba ny tombotsoan'ny fampidinana torrent tsy mitonona anarana? Aza adino ny mizara ny hevitrao.
Ahoana no ahafantarako raha manafina ny adiresy IP-ko ny VPN na torrent proxy?
Rehefa mampiasa VPN na proxy ianao dia omena IP torrent ianao. Azonao atao ny manamarina raha miafina na tsia ny adiresy IP-nao. Mba hanamafisana ny fiainanao manokana dia azonao atao ny manamarina ny torrent IP anao amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny tranokala toy ny iPleak.net, DNSLeak, na ipMagnet.
Afaka tratra ve aho raha tsy misy VPN?
Ny hetsika ataonao dia mety ho hitan'ny tompon'ny zon'ny mpamorona rehefa mampiasa torrent tsy misy VPN. Manao izany izy ireo amin'ny fandraisana anjara amin'ny torrent ary mijery hoe iza koa no ao. Ireo tompon'ny zon'ny mpamorona ireo dia afaka mifandray amin'ny mpanome tolotra Internet anao, izay handefa fampitandremana ho anao.
Afaka manakana ny torrent ve ny ISP?
Eny, ny ankamaroan'ny ISP dia afaka manakana ny torrent. Manao izany izy ireo mba hiarovana ny tenany amin'ny fampandrenesana DMCA, ny mpisolovava momba ny zon'ny mpamorona, ary ny fanarahana ny lalàna torrent. Izany no antony tena nanolorana azy ho mampiasa VPN.
Afaka manakana ny VPN-ko ve ny ISP-ko?
Eny, ny mpanome tolotra aterineto anao dia afaka manakana ny fidirana amin'ny VPN amin'ny fanakanana ny adiresy IP mifandraika amin'izany na amin'ny fanalana ny seranan-tsambo. Azonao atao ny mamaha ity olana ity amin'ny alàlan'ny fifindrana fotsiny amin'ny mpizara, seranan-tsambo, na protocol hafa.
Ahoana ny fanadiovana ny MacBook maloto anao - 29 Desambra 2021
Ahoana ny fampiasana Time Machine hanohanana ny Mac anao - 27 Desambra 2021
Ny milina karaoke 5 tsara indrindra - 17 Desambra 2021
'Queen Charlotte': Ny zavatra rehetra fantatsika momba an'i Bridgerton an'ny Netflix
Kaody Bad Business hahazoana ody, hoditra ary CR maimaim-poana (Janoary 2022)
Ny sarimihetsika 'Harry Potter' ve ao amin'ny Netflix amin'ny 2022?
'Shadow and Bone' vanim-potoana 2 manampy mpikambana 4 vaovao; manomboka ny famokarana